Kedu ka esere ese ndị a na-eyi n'ahụ si enyere ndị mmanye iwu aka? - OMG Ngwọta
Kedụ ka igwe na-eyi onyunyo si enyere ndị mmanye iwu?
Elele igwefoto ndi mere ahu ka otu uzo iji dozie ihe ima aka ma meziwanye mmebe iwu. Teknụzụ, enwere ike ịwụnye ya na enyo enyo ma ọ bụ mpaghara obi onye uwe ojii, na-enye ozi gbasara oge mgbe ndị ọrụ uwe ojii na-agagharị ma ọ bụ na-arụ ọrụ ndị ọzọ na-eme ka ha na ndị obodo. Uru ọzọ nke igwefoto nwere ahụ mmadụ bụ ikike ha iji nye ndị mmanye iwu na ngwaọrụ a na-enyocha iji kwalite nchekwa onye ọrụ na arụmọrụ yana ọ na-egbochi mpụ.
Ndị ọrụ mmanye iwu n'ofe United States na n'ụwa niile na-eji igwefoto eyi (BWCs) dịka ngwa ọrụ iji mezi nsonaazụ pụtara mma, wee bulie nchekwa nke, ma melite mmekọrịta dị n'etiti ndị ọrụ nche na ọha. BWCs na-egosipụtakwa ịbụ ihe dị mkpa iji nyere ndị mmanye iwu aka, idozi nsogbu, na usoro njikọta obodo n'ime ikike. ”Bureaulọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ikpe Ziri Ezi kwuru.
Achọpụtala ngwa ngwa nke igwefoto ahụ yi n'ahụ na afọ iri gara aga na US. Ndị otu ọha na eze na-aga n'ihu na-akwado teknụzụ. Ọmụmụ ihe ọmụmụ ugbu a na-atụ aro na igwefoto ndị nwere anụ ahụ na-enye uru maka mmanye iwu, mana nyocha ọzọ dị mkpa iji ghọta nke ọma na teknụzụ maka mpaghara ahụ. N’isiokwu a, a kọwara ya etu esi ese igwe eji enyere igwe aka.
Abamuru nke Igwe Ndị A Na-ahụ Maka Ahụ
Nrara na inyefe igwefoto nke otu ahu emeela ka ndi ulo omebe iwu nye aka nke ukwuu. Benefitsfọdụ uru ụfọdụ dị n'iji teknụzụ a bụ:
Mee ka ntụkwasị obi ọha na eze gbasara ndị uwe ojii mpaghara
Edebanyela ọnụ ọgụgụ mkpesa megide ndị uwe ojii ma ọ bụ ndị ọzọ na-etinye iwu
Oge ikpe mara banyere ikpe n'ihi ihe akaebe eserese siri ike
Mbelata na mwakpo ndị uwe ojii
BWC (Body Worn Cameras) kpuchie ebe ndị ahụ edobeghi CCTV
Ndị ọrụ ndị uwe ojii na-eme ka nkà sikwuo ike mgbe ha tụlechara otu ha nọ n'ọhịa.
Igwefoto a na-eyi n’ahụ nwere ọtụtụ uru ndị ọrụ obodo na ndị uwe ojii ji akpọrọ ihe nke ọma nke na-eme ka e nwee iwu na usoro zuru oke.
Ihe akaebe a na-apụghị ịkọwa akọwa:
Otu uru dị ukwuu dị na Body Worn Cameras bụ na ha na-enye ihe akaebe zuru ezu nke enwere ike ịnwe dị ka ihe akaebe na-enweghị mgbagha n'ụlọ ikpe ma na-enyere aka ịgba akwụkwọ mma. Maka ikpokọta ụdị ihe akaebe a ka enwere ụfọdụ usoro ogbugba ndu:
Ojiji nke ngwaọrụ ezoro ezo
Enweghị nhichapụ ma dezie atụmatụ dị na cam ndị a
Mwepu onwe ya na ihe onyonyo mgbe ụbọchị 31 gachara
Ike ịchekwa ihe achọrọ
Audzọ nyocha zuru ezu
Nkwupụta ka mma:
Igwefoto ndị nwere anụ ahụ nwere ike ibute nghọta kacha mma na ịza ajụjụ ma si otú a na - enyere aka ma melite mmanye iwu. A na-ahụ na n'ọtụtụ obodo, enweghị ntụkwasị obi n'etiti ndị obodo na ndị ọrụ mmanye iwu. Enweghị ntụkwasị obi a na-aka njọ mgbe enwere ajụjụ gbasara iji ike na-egbu egbu ma ọ bụ nke na-enweghị ike igbu ya. Ihe nkiri vidio a na-ejide n'oge mmekọrịta ndị uwe ojii na ndị uwe ojii nwere ike iwepụta akwụkwọ ka mma iji nyere aka gosipụta ụdị ihe omume na nkwado nkwado nke ndị isi na ndị obodo.
A na - ahụta ka ụmụ amaala enwekwaghachisị ike n’iwu ndị uwe ojii n’oge ha zutere. Citizensmụ amaala na-agbanwekarị omume ha mgbe ha ma na a na-edekọ ha. Ọ na - enyere ndị mmanye iwu n'ụzọ dị etu a ka esi edozie ndị na - aga ala ngwa ngwa kama ịgbaga n'ụdị ebe iji ike mee ihe dị mkpa.
E kwuwerị, anyị maara na igwefoto ndị ọzọ na-agbanwe omume. Igwe onyonyo onyonyo nke ọha na-eme ka ndị mmadụ na-ebute mmebi iwu na-agafeghị oke, ọkachasị n'ebe a na-adọba ụgbọala. Igwefoto okporo ụzọ na-ebelata oke ọsọ na ihe ọghọm.
Ọbụnadị aro onye mmadụ na-ele na-amasị anyị. Na 2011, ndị nyocha na Mahadum Newcastle dị na England bipụtara foto nke ụmụ nwoke anya abụọ na isi okwu,
"Ndị ohi zoro ezo: Anyị na-eche gị nche."
Izu igwe kwụ otu ebe jiri pasent 62 belata ebe ndị ahụ - ọ bụghịkwa ebe ọzọ.
Ojiji igwefoto ndi ahu n’eme ka ha nye ohere ohere iji mee ka ndi uwe ojii bia n’iru ọzụzụ. Ndị na-eme iwu na ndị na-ahụ maka iwu nwere ike iji ihe ngosi iji nye ahụmịhe nke ndị na - ezute ụwa. Ha nwere ike inyocha ọrụ ndị ọrụ uwe ojii na omume ndị kamera na-eyi. Ọ na - enyere aka inweta ọkaibe n’etiti ndị ọrụ nche na ndị ewee ewe iwe. Ha ga-ama ihe enwere ike imehie ihe n'ihu ọha yana otu esi ezere ya.
Mmejuputa atumatu ohuru ohuru:
Ihe onyonyo vidio a na-ejide na igwefoto nwere ahụ nwere ike inye ndị ọrụ mmanye iwu zuru ezu data iji mejuputa usoro ọhụụ kachasị mma iji nweta ntụkwasị obi ọha na eze yana ịkwadobe iwu kachasị mma na obodo ahụ.
Nsonaazụ kacha mma ma dị mma:
Igwefoto ndị uwe na-eyi na-eme ka ọnụego mkpebi nke iji mmanye ike ma ọ bụ omume ọjọọ site n'aka ndị ọrụ mmanye iwu. Nyocha nke ikpe metụtara akụkọ na-ezighi ezi banyere nzute ndị uweojii na ụmụ amaala na-abụkarị “ekwagideghị” ma mechikwaa ya mgbe enweghị vidiyo vidiyo ma ọ bụ ndị nweere onwe ya ma ọ bụ ndị na-ekwupụta ihe akaebe. Nke a, n'aka nke a, nwere ike ibelata ntụkwasị obi nke ndị ọha na ntụkwasị obi na ndị mmanye iwu na ịbawanye echiche na ebubo nke mkpesa megide ndị ọrụ nche agaghị edozi ya nke ọma. Vidiyo ndị kamera na-eyi ahụ nwere ike inye aka kọwaa eziokwu nke nzute ma rụpụta mkpebi ngwa ngwa.
Ọ na-eme ka onye uwe ojii nwekwuo obi ike:
N'akụkụ uru nhazi nke igwefoto ahụ, ndị ọrụ ahụ n'onwe ha enwetela ezigbo nsonaazụ site na iji igwefoto ndị ahụ mebere anụ ahụ na 93% nke ndị ọrụ nche kwenyere na igwefoto ahụ na-enyere aka na nchịkọta aka na 80% nke ndị uwe ojii na-enwe mmetụta igwefoto eyi.
Mkpesa ole na ole gbara akwụkwọ megide ndị ọrụ:
A na-ahụ mbelata dị ukwuu na mkpesa gbara akwụkwọ megide ndị ọrụ uwe ojii nwere igwe aka. Ọnụ ọgụgụ nke mkpesa megide ndị ọrụ tụfuru site na mkpesa 0.7 kwa 1,000 kọntaktị na 0.07 kwa kọntaktị 1,000 kwuru na mbipụta.
Ọ bụ ezie na ihe niile a dị n'elu na-egosi ọtụtụ ihe ọma dị n'iji kamera ndị a na-eyi n'ahụ maka ndị uwe ojii na ndị ọrụ mmanye iwu, ekwesighi ka igwe foto ahụ n'onwe ha bụrụ 'mgbọ anwansi'. Igwefoto a na-eyi n'ahụ bụ otu n'ime ọtụtụ ngwaọrụ enwere ike iji ya rụọ ọrụ nke ndị uwe ojii ọgbara ọhụrụ iji melite arụmọrụ na nchekwa.
Nzuzo 5693 2 Echiche Taa